Posted On:January 31,2019
गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल पर्यटन प्रवर्धन उपसमितिले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट २०२० को लक्ष्य पूरा गर्नका लागि समेत यस उपसमितिले सहकार्य गर्दै आएको सर्वविदितै छ । सोही क्रममा सन् २०१८ मा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गर्दै ग्लोबल भिडियो प्रतियोगिता सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ३ उत्कृष्ट प्रतियोगिहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै पर्यटन प्रवर्धन उपसमितिले नेपाल सरकारले मनाउन गइरहेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा थप टेवा पुर्याउनको लागि नेपाल क्लिक प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको छ । यस प्रतियोगितामा नेपालको कला संस्कृति, भाषा, मौलिक भेष–भुषा पर्यटकीय स्थलहरु, स्थानीय तहमा प्रचलित परिकार, चाडपर्व लगायतका मौलिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर फोटोहरु समावेश गर्नुपर्नेछ । यस प्रतियोगिताको मूल शिर्षक Life Time Experiences तय गरिएको छ । यस प्रतियोगिताको सुरुवात नेपाल पर्यटन बोर्डको २०औं वार्षिक उत्सवमा माननीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री रविन्द्र अधिकारीले विधिवत रुपमा गर्न भयो ।
यस प्रतियोगितामा पहिलो पुरस्कार नगद रु. ५० हजार, दोश्रो पुरस्कार नगद रु. ३० हजार र तेश्रो पुरस्कार नगद रु. २० हजार व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त रुपमा प्रकाशित गर्ने फोटो म्यागजिनमा समेत सो प्रतियोगिताका विजेताहरुको नाम सहित उनीहरुले खिचेका फोटो प्रकाशित गरिने छ ।
प्रतियोगितामा भाग लिने सहभागीहरुले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन एवं मौलिकता झल्काउने किसिमका फोटोहरु तल उल्लेख गरिएको वेभ लिंकमा पठाउन हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ ।
"गैरआवासीय नेपाली संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच सम्झौताः"